विश्व Archives - Gaule News
चिनमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित छन् : राजदूत यान्छी
गाउँले न्युज, काठमाण्डौ । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चीनमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहेको बताएकी छन् । मंगलबार सञ्चार माध्यमसग कुरा गर्दै राजदूत होउले नेपालीहरूको स्वास्थ्यलाई चीनले सुरक्षित गरेको र त्यहाँ कुनै पनि नेपाली कोरोना भाइरसबाट प्रभावित नभएको बताइन् । राजदूत होउले चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको एक डिभिजन बेइजिङमा रहेको नेपाली राजदूतावाससँग सम्पर्कमा रहेको र वुहानमा रहेका […]
सोमालियामा कार बम विष्फोट, ७६ जनाको मृत्यु
गाउँले न्युज, काठमाडौं । सोमालियामा कार बम विस्फोट हुँदा ७६ जनाको ज्यान गएको छ । ९० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । बिहान राजधानी मोगादिशुको चेकपोस्ट नजिकै बम विस्फोट भएको हो । प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएअनुसार, सडक निर्माण कार्यमा जुटिरहेका टर्किस इन्जिनियरहरू नजिकै विस्फोट भएको थियो । सोमालियामा भोकमरी सुरु भएदेखि टर्की त्यहाँको मुख्य दाता हो । […]
नयाँ दिल्लीमा मोबाइल र इन्टरनेट बन्द
गाउँले न्युज, भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको केही स्थानमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा प्रदर्शन तिब्र भएपछि दिल्लीमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हो । नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा पछिल्लो दुई सातादेखि भारतको विभिन्न प्रान्तमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ । दिल्ली पुलिसले मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई […]
हङकङमा वर्षकै ठूलो सामुद्रिक आँधी टाईफून सिग्नल नं. ८, जनजीवन अस्तव्यस्त
गाउँले न्युज, १५ साउन, काठमाण्डौ । हङकङ अब्जरभेटरीले हङकङमा यो वर्षकै पहिलो ठूलो सामुद्रिक आँधी टाईफून सिग्नल नं. ८ (No. 8 Northeast Gale or Storm Signal) शुरु भएको सूचना जारी गरेको छ । वर्षकै ठूलो आँधी बेहेरी हङकङको समय अनुसार अपरान्ह १:४० बजेदेखि शुरु भएको हो । टाईफून सिग्नल नं. ८ का कारण जनजीवन प्रभावित […]
ब्राजिलको अल्टामिरा जेलमा कैदीहरुबीच झडप, ५२ जनाको मृत्यु
गाउँले न्युज, १४ साउन, काठमाडौं । ब्राजिलको पारा राज्यको एक जेलमा रहेको कैदी बन्दीबीच झडप हुँदा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीका अनुसार स्थानीय समय बिहान ७ बजेबाट सुरु भएको झडप मध्याह्नमात्र नियन्त्रणमा लिइएको थियो । जेलमा करिब पाँच घण्टासम्म झडप भएको थियो । स्थानीय मिडियाहरुका अनुसार जेलको एकातर्फ रहेका कैदीहरु अर्कोतर्फ बसेका कैदीहरुको […]
अर्बपति पनि भोकै मर्ने देश
कुनै समय जिम्बाबे अफ्रिकाको एक धनी देश मानिन्थ्यो । यहाँको निर्यात र क्रिकेट विश्वमा चर्चित थियो । सन् १९८० सम्म यो देश बेलायतको उपनिवेश थियो । रोबर्ट मुगावेले गोराबाट देशलाई स्वतन्त्रता दिलाएपछि उनी नै प्रमुख शासक बने । अहिलेसम्म उनी नै प्रमुख छन् । मुगावेले देशका सबै नागरिकलाई धनी बनाउने उद्देश्यले गोराबाट भूमि हडप्दै काला जातिलाई बाँडिदिए । पैसा अनावश्यक रूपमा […]
हङकङ: संसद भवनमा छिरेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले निकाल्यो
गाउँले न्युज, १७ असार, काठमाण्डौ । हङकङको संसद भावनामा छिरेर तोडफोड गर्ने प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरिले अश्रुग्यास प्रयोग गरी त्यहाँबाट बाहिर निकालेका छन् । ब्रिटेनबाट हङकङको सार्वभौमिकता चीनलाई सुम्पिएको वर्षगाँठको कार्यक्रमका बेला प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले विधायक परिषद्को भवनमा घण्टौँसम्म कब्जा जमाएका थिए । प्रदर्शनकारीलाई भवन खाली गर्न चेतावनी दिएका सयौँ सङ्ख्यामा रहेका प्रहरीले मध्येरात पछि उक्त भवनलाई […]
सम्पतिको लोभ गर्नेहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गर्न सक्दैन : सी जिनपिङ
गाउँले न्युज, १६ असार, काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सी जिनपिङले व्यक्तिगत धन सम्पतिको लोभ गर्नेहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रपति सीले व्यक्तिगत धन सम्पतिको जोह गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरुले देश, जनता र कार्यकर्ताको सेवा गर्न नसक्ने बताए । चीनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष अभियान चलाएर विश्व चर्चित बनेका सीले नीजि […]
आफ्नै अंगरक्षकद्वारा गोली हानी इथियोपियाका प्रधानसेनापतिको हत्या
गाउँले न्यूज, आदिस– इथियोपियाका प्रधान सेनापतिको गोली हानी हत्या भएको इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबिय अहमदले बताएका छन् । टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री अहमदले अम्हारा राज्यमा भएको असफल सैनिक सत्ता विद्रोहलाई भने सरकारले बिफल बनाएको जानकारी दिए । सैनिक पोशाकमा टेलिभिजनसामु देखिएका प्रधानमन्त्री अहमदले सेनापति सियर मेकोनेनको उनकै अंगरक्षकले गोली हानी हत्या गरेको जानकारी दिए […]
पूर्वराष्ट्रपति मोर्सीको अदालतमा सुनुवाइ हुँदाहुँदै निधन
गाउँले न्यूज, ३ असार, काठमाडौं । इजिप्टका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीको अदालतमा सुनुवाइ भइरहेका बेला अकस्मात लडेर निधन भएको इजिप्टका सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनको पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुडले भने सरकारी भनाइको खण्डन गर्दै उनको हत्या भएको दाबी गरेको छ । अधिकारवादी र परिवारका सदस्यहरुले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुँदाहुँदै उचित उपचार नपाएर उनको ज्यान गएको भन्दै […]
श्रीलंकामा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध
गाउँले न्यूज, ३० वैशाख, काठमाडौं । श्रीलंका सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ । केही दिनअघि इस्टर पर्वमा भएको बम आक्रमणपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत विवाद हुँदा हिंसात्मक घटना भएपछि सरकारले सामाजिक सन्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार श्रीलंकामा फेसबकु, ट्वीटर, ह्वाट्सएपलगायत सन्देश पठाउन मिल्ने अन्य सामाजिक सञ्जालसमेत अस्थायी रुपमा […]
थाइल्याण्डका राजाले गरे आफ्नी अंगरक्षकसँग विवाह
गाउँले न्यूज, १९ बैशाख, काठमाण्डौ । बुधबार थाइल्याण्डका राजा वजिरालंगकर्नले उनको व्यक्तिगत सुरक्षा टिमकी उपप्रमुख सुथिदा टिदजाईसँग विवाह गरेका छन् । राज्यभिषेकको तीन दिन अघि भएको विवाहको घोषणाबाट धेरै आश्चर्यमा परेका छन् । विवाह राजपत्रमार्फत घोषणा गरिएको थियो । बुधबार भएको विवाह समारोहको फुटेज सबै थाई टीभी च्यानलमा बेलुकीपख प्रशारण हुने दरबार खण्डमा देखाइएको थियो […]